RUUSHKU WUXUU NOQDAY KAN KU GUULEYSTAY TIRADA FARDAHA EE QOFKIIBA - MAQAALLO
Ruushku wuxuu noqday kan ku guuleystay tirada fardaha ee qofkiiba
Tani waxaa lagu sheegay warbaahinta Shiinaha, oo xiiseynaysay in ay tirakoobaan tirooyinka tirada fardaha ee qof walba oo ku nool waddamo kala duwan. Ruushka ayaa markii ugu horeeyay ku guuleystay, hadda waxaa jira ilaa 26 fardah oo 100 qof ah. Sidaas darteed, Russia, inta badan xoolaha xoolaha ee dunida - 22 milyan oo qof.
Saxafiyiinta Shiinaha ayaa sheegay inaysan aheyn wax la yaab leh in ay jiraan ciyaartoy farabadan oo Ruush ah. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, dadka deggan ee Siberia iyo Stephan waxay xajin jireen tirada kabadan 20 faras. Horses, khubaro beeraha faras, waxay ku doodayaan in noocyada shisheeye shisheeye, oo horey ugu noolaa Ruushka in ka badan laba qarniyadood, waxay si buuxda u la qabsadeen xaaladaha cimilada, nafaqada iyo nolosha, waxayna qaadeen nooc cusub oo faras ah - qalabkii Ruushka.